Tube of John Paul II's blood stolen in Italy - သတင်း Rule
အီတလီမှာခိုးယူဂျွန်ပေါလ် II ကို၏အသွေး tube
ပိုလနျပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် II ကိုရဲ့သွေးပါဝင်တဲ့တစ်ဦးကပြွန်အီတလီနိုင်ငံဘုရားကျောင်းထဲကနေခိုးယူခဲ့, sniffer ကိုခွေးပတျသကျတဲ့ဒေသ-ကျယ်ပြန့်ရှာဖွေရေးညိုအုန်းမြင့်နှင့် 50 ရဲအရာရှိများ, အီတလီမီဒီယာများအစီရင်ခံစာများတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်.
အဆိုပါဖလားကိုတောင်တန်းအတွက်စန်း Pietro della Ienca ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထဲကနေစနေနေ့ကခိုးယူခဲ့ Abruzzo ဒေသအလယ်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံရှိရာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, သေဆုံးတဲ့သူ 2005, နှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက်အပေါ်သွားကြဖို့ကိုခစျြ, အ Repubblica နေ့စဉ်အညီ.
ရဲနှင့် sniffer ကိုခွေးဧရိယာလောကထဲကလူတော်တော်များများနေကြ, ၎င်း၏ရာသီဥတုကျောက်ကိုအိမ်များနှင့်ရှိရာ၏ဦးခေါင်းကိုငယ်အသင်းတော်ကိုကျော်ကြား ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း တခါသတင်းများအရမုန်တိုင်းခိုလှုံယူ.
Pasquale Courier, ၏ဦးခေါင်းကို “Ienca ၏စိန့်ပတေရုသ” အသင်း, ယခင်ပုပ်ရဟန်းမင်းရဲ့သွေးပါဝင်တဲ့ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျသာသုံးဖလားရှိပါတယ်ဟုပြောသည်.
ဂျွန်ပေါလ် II နှင့်အီတလီပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးယောဟနျသ XXIII — ထိုအဖြစ်လူသိများ “ကောင်းသောပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး” — ဘုရားဖူးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာဆွဲရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းဧပြီလဗာတီကန်မှာအခမ်းအနားအတွင်းသန့်ရှင်းသူတို့ဖြစ်လာမှသတ်မှတ်ထားကြသည်.
Philly အတွက်နေရာအတည်မပြုနိုင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအလည်အပတ် readies 2015
ဂျွန်ပေါလ် II ၏ကိုယ်ရေးမှတ်စုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့
လက်ထောက်မီးလောင်ရာမှသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးနောက်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် II ကိုရဲ့မှတ်စု
16759	0 Abruzzo, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း, သန့်ရှင်းသောဘုရား See, အီတလီ, ဂျွန်ပေါလ်, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် II ကို, ဗာတီကန်
←5ကြောင့်ခေတ်သစ်နည်းပညာရန်ယခုဖြစ်နိုင်ပါ့မလားနောက်ဆုံးသတင်းများအလှအပအကျိုးကျေးဇူးများ Microsoft က PS4 ကိုအပြိုင် Xbox One မှာ GPU ကို tweaks လိမ့်မည် →